अनारका फाइदा मात्रै छैनन्, यस्ता हानी पनि छन्, सतर्क हुन पर्छ – List Khabar
Home / स्वास्थ्य / अनारका फाइदा मात्रै छैनन्, यस्ता हानी पनि छन्, सतर्क हुन पर्छ
अनारका फाइदा मात्रै छैनन्, यस्ता हानी पनि छन्, सतर्क हुन पर्छ
admin July 17, 2021 स्वास्थ्य Leaveacomment 17 Views
अनारमा केहि यस्ता महत्वपूर्ण तत्व हुन्छ, जो हाम्रो शरीरको लागि एकदमै आवश्यक हुन्छ । अनारमा फाइबर, भिटामिन ए, भिटामिन सि, भिटामिन के, फोलिक एसिड र एन्टिअक्सिडेन्ट भरपुर हुन्छ । अनार स्वास्थ्यका लागि लाभदायक त छ नै, सौन्दर्यका लागि पनि ।
शरीरमा रगतको अभाव पुरा गर्न अनार उपयोगी मानिन्छ । यद्यपी कुनैपनि फल सोझै सेवन गर्नुभन्दा त्यसको रस बनाएर सेवन गर्नु बढी फाइदाजनक हुन्छ । यद्यपी बजारमा पाइने जुसमा भने मिसावट हुनसक्छ ।
घरमै ताजा रस बनाएर पिउन सकिन्छ । त्यसो सबै मौसमी फलको आ-आफ्नै गुण, विशेषता र महत्व हुन्छ । सबै फल स्वास्थ्यका लागि अति फाइदाजनक हुन्छ । यद्यपी त्यसमध्ये पनि अनार निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । भनिन्छ, अनार सेवन गर्दा दुई किसिमको रोगसँग लड्ने क्षमता बढ्छ । यदि लगातार एक सातासम्म अनार सेवन गर्ने हो भने, त्यसले स्वास्थ्यमा लाभ मिल्छ ।
तौल घटाउन : यदि तौल सामान्यभन्दा बढी छ भने अनारको सेवन लाभदायक हुन्छ । अनारले कम्मरमा जमेको बोसो घटाउने काम गर्छ । किनभने मोटो व्यक्तिको सबैभन्दा बढी बोसो कम्मरमा हुन्छ । अनार वा अनारको जुस सेवन गर्दा उक्त वोसो घट्छ ।
मधुमेहमा फाइदाजनक : मधुमेह रोगीका लागि अनारको सेवन फाइदाजनक हुन्छ । सामान्यत के सोचिन्छ भने अनारमा शुगर हुन्छ । यो सहि हो । तर, त्यसमा रहेको शुगरले शरीरमा शुगरको लेभल बढाउँदैन ।
हृदय रोगमा : अनारको सेवनले रक्त धमनीलाई पोषित गरेर रक्त प्रवाहमा सुधार ल्याउँछ । इटलीको एक विश्वविद्यालयमा गरिएको एक अध्ययन अनुसार अनारको रसले धमनीमा हुने समस्याको उपचार गर्छ । यसका साथै बेलायतको पोषण जर्नलमा प्रकासित अध्ययन अनुसार ८ सय मिलीग्राम अनराको बीजको तेल ट्राइग्लिसराइड्स कम गर्छ र उच्च घनत्व भएको लिपोप्रोटिन अनुपातमा सुधार ल्याउँछ । अनारको जुसमा पाइने तत्वले कोलोस्टोरको मात्रा कम गर्छ । साथै रगतलाई शुद्ध गर्छ । यसले रगत पातलो बनाउँछ ।
स्मरण शक्ति बढाउन : अनारको सेवनले स्मरण शक्ति बढाउने बताइन्छ । यसले अल्जाइमर जस्तो मस्तिष्क सम्बन्धित बिकार हटाउने पनि क्षमता राख्छ । २०१३ मा भएको एक सोध अनुसार दिमागी क्रियामा सुधार ल्याउनका लागि अनारको रस उपयोगी हुन्छ ।
पाचन क्रिया : नियमिन रुपले अनार सेवन गर्दा पाचन सम्बन्धी समस्या पनि हट्छ । पाचन क्रिया सहि भयो भने धेरै किसिमको रोगको भय पनि हुँदैन ।
क्यान्सरको खतरा कम : अनारको सेवनले शरीरमा रहेको विषाक्त पदार्थ बाहिर निकाल्छ । यसले क्यान्सर जस्तो भयानक रोगबाट बचाउँछ । साथै अनारमा एन्टिअक्सिडेन्ट हुन्छ । यसले क्यान्सरको कोशिकालाई नष्ट गरेर ट्युमरको विकासमा पूर्ण बिराम लगाउँछ । अनारको फलको सेवन प्रोस्टेट, फोक्सो, स्तन र छालाको क्यान्सरमा अत्यान्त लाभदायक हुन्छ ।
अनुहारमा निखार : अनार स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ । साथै सुन्दरताको लागि पनि । आर्युवेदमा यसलाई सौन्दर्य बढाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ । अनारको बोक्राको स्क्रब बनाएर प्रयोग गर्दा अनुहारको ब्ल्याक हेड्स हट्छ । साथै अनारको सेवनले अनुहारमा चमक ल्याउँछ ।
गर्भावस्थामा फाइदाजनक : अनारमा भिटामिन र मिनरल हुन्छ । यसका साथै फ्लोरिक एसिड पनि पाइन्छ । यो गर्भमा रहेको शिशुका लागि राम्रो भोजन हो । अनारमा पाइने पोटेशियमले गर्भावस्थामा हुने खुट्टाको दुखाई पनि कम गर्छ ।
– अनारले छालालाई रुखो हुन दिदैन । – अनुहारमा चाउरीपन आउन दिदैन । – अनुहारको दाग धब्बा र डार्क सर्कलबाट बचाउँछ । – अनारको सेवन डन्डिफोरको समस्या हटाउन पनि लाभदायक हुन्छ । – अनारको रस सेवन गर्दा त्यसले केसको सौन्दर्य पनि बढाउँछ । – अनारले केसलाई बलियो र चम्किलो बनाउँछ ।
अनारको हानी : कुनैपनि फलको गुण र अवगुण दुबै हुन्छ । त्यस्तै अनारमा पनि अवगुण हुन्छ । अवगुण भन्नु भन्दा पनि कतिपय अवस्थामा यसको सेवन ठीक हुन्न । – कुनैपनि किसिमको एलर्जी छ भने अनारको सेवनले त्यो एलर्जी थप बढाउँछ । – अनारको रस इन्फ्लुएन्जा, कब्जियत आदिमा राम्रो हुँदैन । – अनारले रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ । यद्यपी यसका साथै औषधी पनि सेवन गरिरहेको छ भने त्यसको नकारात्मक असर पर्न सक्छ । – कतिपय रोगमा औषधी सेवन गरिरहेकाहरुले अनार सेवन गर्नु हुँदैन ।
ध्यान दिनुपर्ने कुरा : – अनारलाई एक हप्तासम्म सामान्य तापमानमा भण्डारण गर्न सकिन्छ । – यदि फ्रिजमा राख्ने हो भने त्यसलाई प्लाष्टिकमा लपेटेर राख्नुपर्छ । – अनारको ताजा बीजलाई चार दिनसम्म पि|mजमा राख्न सकिन्छ ।
– यदि अनारको बिज खाएपछि खाद्य एलर्जी भयो भने त्यसलाई तुरुन्तै रोक्नुपर्छ । – रक्त सम्बन्धी औषधी सेवन गरिरहेकाहरुले अनार खानुअघि चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ ।
Previous आहा ! रोपाइँ गर्दै गरेका रमाइला टिकटक भिडियोहरु भाइरल नै बने (हेर्नुस् भिडियो)
Next भाग्यमानी हुन्छन् यि राशि हुने महिलाहरू, हेर्नुहोस् तपाईंको कुन राशि ?
काठमाडौं। एउटी आमाको लागि उनको बच्चाको महत्व कति हुन्छ भन्ने कुरा संसारलाई थाहा छ । …